Tohanan’ny Harena Manasoa: hahazo sakafo ny mpianatra amin’ny EPP 10 | NewsMada
Tohanan’ny Harena Manasoa: hahazo sakafo ny mpianatra amin’ny EPP 10
Par Taratra sur 01/11/2018
Tsy ampy sakafo tsy afaka mihinana intelo isan’andro ao amin’ny kaominina Andramasina ny ankizy roa amin’ny telo, araka ny fanadihadiana nataon’ny tomponandraikitra tany an-toerana. Nandrisika ny fikambanana Harena Manasoa France hamerina indray ny fizarana sakafo any an-tsekoly izany, nanomboka ny taona 2016 no ho mankaty. “Tamin’ny taon-dasa, nisantarana ny asa ny fokontany ao Ambalavao, kaominina Andramasina ihany ary hiitatra amin’ny fokontany Antanetibe amin’ity taom-pianarana vaovao ity”, hoy ny fanazavan’ny mpiandraikitra ao amin’ny fikambanana, Ramanantsoa Aimée Nicole, omaly teny Anosy. Tanjona hatramin’ny taona 2022 ny hamatsy sakafo ankizy amin’ny EPP 10 ao Andramasina. Vao niandoha ny fizarana sakafo indroa isan-keriandro, nitombo ho 20% ny tahan’ny fidirana an-tsekoly. Indraindray, mandeha an-tsongotra adiny iray sy sasany ny mpianatra hamonjy fampianarana nefa tsy mihinana mihitsy na iray sotro aza satria sahirana ny ray aman-dreny.
Hametrahana fitahirizan-drano sy zaridaina
Ankoatra ny fizarana sakafo, hametraka fitahirizan-drano sy zaridaina hamatsy ny toeram-pisakafoana ny fikambanana hamahana ny olana momba ny rano amin’ny fidiovana sy hikarakarana ny zaridaina. Ety am-piandohana, misy ny tantsoroka ataon’ny fikambanana fa aoriana, hahaleo tena ny mpitantana ny sekoly sy ny mpianatra ary ny ray aman-dreny.
“215 ny isan’ny mpianatra ao amin’ny EPP Antanetibe ka nihena ny mpianatra manapaka fianarana”, hoy ny talen’ny EPP, Rasamimanana Fanja. Vary, lasopy legioma sy arakaraka ny sakafo vokatra ny sakafo zaraina any an-dakilasy. 10 000 euros ny tetibola ampiasaina amin’ny tetikasa vatsin’ny Harena Manasoa France avy amin’ny tsara sitrapo maro. Ny taona 1997 no nijoro ny Harena Manasoa Madagasikara niasa amin’ny “site” 26 niaraka amin’ny Seecaline sy ONN. Nijanona ny tetikasa ny taona 2014 ary izao vao nitohy. Natao omaly ny fanaovan-tsonia eo amin’ny fikambanana sy ny minisitry ny Fanabeazam-pirenena, i Horace Gatien.